Sacuudiga iyo Xulafadiisa oo FIFA ka Dalbaday in Qatar laga qaado Marti-gelinta Koobka Adduunka ee 2022
HomeWararka MaantaSacuudiga iyo Xulafadiisa oo FIFA ka Dalbaday in Qatar laga qaado Marti-gelinta Koobka Adduunka ee 2022
16/07/2017 Samatar Mohamed
Bishii la soo dhaafay Lixdii dal carbeed ee xidhiidhka u jaray dalka yar ee Qatar ayaa la sheegayaa haatan inay warqad u qoreen xidhiidhka kubada cagta adduunka ee FIFA, iyaga oo ka dalbanaya in Qatar laga qaado marti-gelinta Koobka Adduunka ee 2022, waxaanay ku sababeeyeen in Qatar ay hooy u tahay Argagixisadda.
Shabakadda Switzerland ka soo baxda ee The Local ayaa sheegtay in dalalka Sacuudi Areebiya, Yemen, Mauritania, Imaaraadka Carrabta, Bahrain iyo Masar inay si wadajir ah warqad ugu qoreen FIFA, iyagoo weydiisanaya in Qatar laga qaado marti-gelinta Koobka Adduunka 2022, iyadoo loo cuskanayo qodobka 85-aad ee axdiga FIFa taas oo ogolaanaysa in talaabo ceynkan oo kale ah la qaado haddii ay arrin degdeg ahi dhacdo.
Wakaaladda wararka Reuters ayaa sheegtay inaanay weli arkin warqadda, waxaana ay la xidhiidheen xafiiska Madaxweynaha FIFA Mr. Gianni Infantino, waxaana loo sheegay inaanay warqaddu weli soo gaadhin xafiiska Madaxweynaha. “Madaxweynaha FIFA ma aanu helin warqad sidaas ah, sidaasi darteed wax hadal ah kama aanu odhan” ayuu yidhi Afhayeen u hadlay FIFA.
“Sida aan hore u sheegnay, FIFA waxa ay xidhiidh joogta ah la leedahay guddiga maxaliga ah ee qaban-qaabadda dalka Qatar 2022, oo arrintan gacanta ku jira” ayuu hadalkiisa raaciyay.
Ilo ku dhow hawlaha Koobka Adduunka ee Dawwladda Qatar ayaa sheegay in Qatar ay ka warqabto in xulafadda Sacuudigu uu hogaaminayo ay isku dayayaan inay qaataan talaabadan, laakiin iyaguna weli ma aanay soo gaadhin warqaddu.